အလျားလိုက်လျှောစနစ်ရှိသည့် ZTE Axon S ဖုန်းကိုပေါက်ကြားခဲ့သည် Androidsis
အလျားလိုက်လျှောစနစ်ရှိသည့် ZTE Axon S ဖုန်းကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်လုပ်သူ Honor (မှော် 2) Xiaomi (mi ရောသမ 3) နှင့် Lenovo (Z5Proလျှောဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖုန်းများစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤဖုန်းများအားဒေါင်လိုက်အောက်သို့ရွေ့လျားပါကရှေ့ကင်မရာနှင့်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အထက်ဘောင်တွင်တည်ရှိသည်၊ သို့သော်ယန္တရားကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ZTE Axon S သည်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှောကျသောဒီဇိုင်းလည်းရှိသည်အထက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီများမှကျင့်သုံးပြီးသားနှင့်ကွဲပြားခြားနားပြီးဆန်းသစ်တီထွင်သော်လည်း သူ့ဟာသူတွင်၎င်းကိုဒေါင်လိုက်လျှောချလိုက်မည့်အစားအလျားလိုက်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့အောက်တွင်ပြသသောပြန်ဆိုကဖော်ပြသည်။
ZTE Axon S သည်အဆင့်မြင့်ပြီးလျှောကျသည့်မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်ကျန်တာများနှင့်ကွဲပြားသည်
ဒေါင်လိုက်လျှောမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကိုအတူ Honor Magic 2
Axon S တွင်၊ ၎င်းကိုလျှောပစ်မည့်အစားသင်ညာဘက်ကိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ရှေ့ကင်မရာများကြည့်ရှုရန်။ အောက်ခြေတွင်ချဲ့ခြင်းနှင့်ထွက်ခြင်းအတွက် capacitive / touch-sensitive control များဟုထင်ရသည့်အရာများလည်းရှိသည်။ ခလုတ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုအသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်အလင်းတောက်ပမှုကိုညှိနှိုင်းအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းရဲ့နောက်ဖက်ရှိနောက်ဘက်ကင်မရာသုံးလုံးကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံ၏အောက်တွင် xenon flash ရှိပြီးအောက်ခြေတွင်၎င်းကိုရေးသားထားသည် ZTE Axon S တွင် 5x optical zoom နှင့် 48 MP sensor ရှိသည်.
Axon S ၏ဒီဇိုင်းသည်တကယ်ကိုအေးမြသည်။ ဖုန်းပိတ်ချိန်တွင်မည်သည့်ကင်မရာကိုမှသင်မမြင်နိုင်ပါ။ ကျောဘက်မှာမည်သည့်အမှတ်အသားမှမရှိဘဲအနက်ရောင်ဖန်ခွက်ကျောက်ပြားတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးရှေ့ဖက်မှာလှပတဲ့ bezel ပါဝင်တဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်ပါရှိပါတယ်။ ဖန်သားပြင်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည့်လက်ဗွေစကင်နာသည်။ အဆိုပါပြန်ဆိုကိုလည်းဖော်ပြသည် Axon S တွင် 5G အထောက်အပံ့ရှိသည် အောက်ခြေရှိ USB-C port တစ်ခု။
ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသိရှိရသေးသော်လည်း၊ Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာ 6GB RAM နှင့် 128GB သိုလှောင်မှုနေရာတို့ပါရှိသည်။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူရှိပါက၎င်းတွင်အားနည်းနေသည့်အင်္ဂါရပ်လည်းကောင်းလိမ့်မည် Axon 10 Pro ကို 5G.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အလျားလိုက်လျှောစနစ်ရှိသည့် ZTE Axon S ဖုန်းကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
Samsung သည် 12GB RAM module များကိုဖုန်းများအတွက်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်